Weeraro bambaano oo lagu qaaday saldhig ciidamada boolisku ay ku leeyihiin Boosaaso. – Radio Daljir
Weeraro bambaano oo lagu qaaday saldhig ciidamada boolisku ay ku leeyihiin Boosaaso.
Diseembar 20, 2011 12:00 b 0
Boosaaso,Dec,20 -Weeraro bamgacmeed ah ayaa habeenimadii xalay lagu qaaday saldhiga ciidamada booliska ee Minjir oo ku yaala bariga magaalada Boosaaso,kaas oo aan gaysan wax qasaare ah.
Saraakiisha ciidamada booliska Puntland ee gobolka Bari oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay weerarada bagacmeedka ee xalay lagu weeraray saldhiga inay ahaayeen kuwa isxigxigay,iyadoona goobta uu weerarku ka dhacay ay ka baxsadeen kooxihii weerarka soo qaaday.
Ciidamada amaanka ayaa wada howlgalo balaaran oo ay ku baadigoobayaan kooxihii weerarka gaystay.
11 qof ayaa ku geeriyootay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday Jubada Hoose.
War Saxafadeed: Ururuka Qurbajoogta Puntland – Taageero Shirka Wadatashiga Dastuurka Soomaaliya.